Lelee nsonaazụ NBA site na njikwa | Site na Linux
Lelee nsonaazụ NBA site na njikwa
Ndị NBA nwere ezigbo CLI ngwa ọrụ ha nwere iji nwee ọnụ ọgụgụ, ihe ọkpụkpọ, nsonaazụ egwuregwu, na egwuregwu ndị na-abịa. nba go na-enye gị ohere ịnweta ezigbo oge ọmụma na ihe niile metụtara NBA si nkasi obi nke console.
1 Gịnị bụ NBA Go?
2 Etu esi etinye ma jiri NBA Go?
Gịnị bụ NBA Go?
NBA Go na-enweta data site na stats.nba.com Isi mmalite nke ozi NBA, a na-enye ya ndị ọrụ n'ụzọ zuru ezu, na ịnweta iwu dị mfe yana na CLI dị oke ọsọ ma na-atọ ụtọ.
Ezigbo CLI a na-egosi anyị ihe omuma tupu ịmalite egwuregwu dị ka ntụnyere n’etiti otu abụọ ahụ, akara ha na ọnụ ọgụgụ gara aga, mgbe a na-egwu egwuregwu NBA, akụrụngwa na-egosi anyị ngụ oge ngụkọta oge, akara akara, ozi gbasara egwuregwu ọ bụla emere, wdg. ihe a niile site na ntanetị mara mma (N'ezie ihe ịtụnanya). N'ikpeazụ, na njedebe nke egwuregwu ahụ, ngwá ọrụ ahụ na-egosi anyị akara, akara zuru ezu nke okpokoro, wdg.
N'ime onyinye ndị a nke Homer Chen mere, ị ga - ahụ otu CLI si arụ ọrụ tupu, n'oge na mgbe egwuregwu ọ bụla.
Etu esi etinye ma jiri NBA Go?
Ọrụ nke NBA Go dị nnọọ mfe, o zuru ezu na anyị ji ngwa ọrụ kwesịrị ekwesị na-agba ọsọ ahụ yana ọ ga-enye anyị ohere ịhụ data na-atọ ụtọ ka anyị na-egosi, isi ihe bụ:
Iji lelee ozi dabara na egwuregwu NBA, anyị ga-agharịrị iwu a: nba-go game.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta ozi gbasara otu ọkpụkpọ NBA, anyị ga-emerịrị iwu ahụ: nba-go player nombredeljugador
Enwere ike ịchọta ozi zuru ezu banyere ọrụ nke ngwa ọrụ na iwu ị ga-eji na CLI github nke ị nwere ike ịnweta site na ndị a njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Lelee nsonaazụ NBA site na njikwa
mepee nke yiri ya mana maka bọọlụ lee nsonaazụ nke asọmpi europe
Etu esi wunye Odoo na docker ma tinye modulu di na mpụga